रेशम चौधरी अपराधी भए चुनाव लड्न किन दिएको ? - नेपाल समय
रेशम चौधरी अपराधी भए चुनाव लड्न किन दिएको ?
राजेन्द्र महतो मधेस आन्दोलनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय आन्दोलनमा समेत स्थापित नाम हो। जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा आन्दोलनरत सात दलमध्येको एक घटकमा थिए महतो। मधेस आन्दोलनका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहलाई आदर्श व्यक्तित्व मान्ने महतो अहिले ६ मधेस केन्दित दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीमा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक छन् । कुनै बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आलोचक मानिएका महतो अहिले भने ओलीसँग नरम देखिएका छन्। संविधान संशोधनको माग अगाडि सारेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महतोसँग नेपाल समयका लागि बालकुमार नेपाल र मित्र भण्डारीले गरेको कुराकानी :
राजपा अहिले के गर्दैछ ?
अहिले हामी ६ पार्टी एक भएर बनेको राजपाको महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छौं । पार्टी अहिले चक्रीय प्रणालीमा संयोजक रहेर सञ्चालन भइरहेको छ । ६ पार्टी एक हँुदा हामीले अपनाएको यो प्रणालीले सधैं पार्टी अगाडि बढ्न सक्तैन । त्यसैले हामीले आगामी वैशाख ७, ८ र ९ गते काठमाडौंमा महाधिवेशन मिति तय गरेका छौं । त्यसपछि पार्टी चुस्त र एक भएर अगाडि बढ्नेछ ।
तीनतीन महिनाको चक्रीय प्रणालीबाट पार्टी अगाडि बढाउन गाह्रो हुँदैन ?
काम गर्दा कहिलेकाहीं व्यावहारिक कठिनाइ आएको छ । तर पार्टी एकता गर्दा हामीले चक्रीय सूत्र बनाएका थियौं । ६ पार्टीका नेताहरूको अध्यक्ष मण्डल बनाउने र संयोजक जो भए पनि निर्णय सामूहिक अध्यक्षबाट गर्ने निर्णय भएकाले त्यतिसारो असर र अप्ठ्यारो परेको छैन । अबको चार महिना यही चक्रीय प्रणालीबाट चले पनि अधिवेशनपछि पार्टीमा यसको अन्त्य हुन्छ ।
चक्रीय प्रणालीमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा किन विवाद हुन्छ त ?
अध्यक्ष मण्डलमा त्यस्तो विवाद छैन । तत्कालीन संयोजक महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वबाटै त्यस्तो प्रस्ताव आएको हो र त्यसलाई हामी सबैले स्वीकार गरेका हौं । तर बाहिरबाट केही साथीहरूले फरक मत राखेका हुन् । लोकतन्त्रमा परिवर्तनको चाहना नगर्नेहरूले आफ्ना विचार राखे । विचार राख्दैमा केही फरक पर्दैन ।
मधेसका दुई पार्टी राजपा र फोरम एउटै एजेन्डा लिएर चुनावमा गए । एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा दुई पार्टी किन दुईतिर ?
तपाईंले ठिक कुरा उठाउनुभयो । सात पार्टी मिलेर आन्दोलन गर्‍यौं । हामीले ६ पार्टी मिलाएर राजपा बनायौं । एउटा पार्टी फोरम अहिले बाहिर छ । हामी एउटै एजेन्डा लिएर आन्दोलनमा गयौं । आन्दोलनमा हाम्रा कैयौं कार्यकर्ता सहिद भए । हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा दुई नम्बर प्रदेशमा राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार छ । संविधान संशोधनलगायतका सबाल संघीय सरकारसँग थिए । अहिले हामीले संयुक्त रूपमा संघीय सरकारमाथि दबाब दिनुपथ्र्याे । तर त्यसो हुन सकेन । फोरम सरकारमा गयो । संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्न नसकेका बेला उहाँहरू किन र कुन प्रयोजनका लागि सरकारमा जानुभयो त्यसको जबाफ फोरमले दिनुपर्छ ।
त्यसो भए फोरमले संविधान संशोधनको मुद्दा छोड्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
म त्यो पनि भन्दिनँ । उहाँहरूले आइतबार मात्र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो भन्ने सुनेको छु । त्यसमा संविधान संशाधनको विषय समेटिएको समाचार आएको छ । विडम्बना ! सरकार बनेको १० महिना भयो तर संविधान संशोधनलागायत मधेसका जनताले उठाएको मुद्दा अहिलेसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । आन्दोलनका एजेन्डा सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर समाधान गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो त्यो हुन सकेको छैन ।
फोरमले सरकारमा गएर तपाईंहरूलाई धोका दिएको हो त ?
राजनीतिमा सरकारमा जानु र बाहिर बस्नु सामान्य कुरा हो । तर एउटै एजेन्डा लिएर लडेको पार्टी उद्देश्य पूरा नहँुदासम्म सँगै लडेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । उहाँहरूले संविधान दिवस मनाउनुभयो । हामीले त्यो दिन संविधानको विरोध गर्‍यौं । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रो बीचमा केही न केही गडबडी छ । यस्तो अवस्थामा उहाहरूँग सहकार्य गर्न समस्या छ ।
यो देशमा कांग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन गरेको होइन ? माओवादी र एमालेले सशस्त्र आन्दोलन गरेका होइनन् ? माओवादीले १७ हजार मान्छे मार्‍यो । सबै आन्दोलनमा दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा सर्वसाधारण र प्रहरी दुवै मारिएका छन् । तर उहाँहरूमाथि मुद्दा त लागेन ।
तपाईंहरूले सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ तर तपाईंको दलका कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फुकुवा भएको छैन । यो घटनाले मधेस आन्दोलनमै प्रश्न उठाउँदैन ?
सरकारलाई हामीले १० महिनासम्म सित्तैंमा समर्थन दिएका हैनौं । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्टमबाट हामीले उठाएका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने वचन दिनुभएको थियो । त्यसकै आधारमा हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका हौं ।
हामीले उठाएको विषयमध्ये संविधान संशोधन, कैलालीबाट संघीय सांसद रेशम चौधरीको शपथ, मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइका माग हामीले राखेका थियौं । प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले उठाएका मुद्दाको समाधान गर्ने वचन दिएपछि हामीले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका हौं । हामीले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक दबाब दियौं र अब हाम्रो धैर्यको बाँध टुट्यो भनेर हामीले सात दिनको अल्टिमेटम दिएका थियौं । उहाँले आठौं दिनमा रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउनुभयो । जनताको मतबाट निर्वाचित सांसदले शपथ खान पाउनु उसको अधिकार थियो । प्रमाणपत्र पाउनु उसको अधिकार थियो ।
टीकापुर हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीलाई सांसद पदमा गराएको शपथले कानुनकै उपहास गर्‍यो भन्ने चौतर्फी आवाज उठेको छ । उनको मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याएर शपथ खुवाएको भए त हुन्थ्यो नि, यसमा राजपा चुक्यो होइन ?
तपाईंले उठाएको बाटो पनि ठिक हो । राज्यले त्यो बाटो पनि अख्तियार गर्न सक्थ्यो । म भन्न चाहन्छु यो मुलुकमा कुनै मुद्दा लागेको र प्रमाणित नभएको रेशम चौधरीमाथि प्रहरीले मुद्दा लगाइदिएको छ उनी योजनाकार भनेर । प्रहरीले मुद्दा लगाउँदैमा अपराधी हुन्छ ? त्यसो भए रेशम चौधरीलाई चुनाव लड्न किन दिएको ? देशबाहिर भएको व्यक्तिको वारिसनामाबाट नोमिनेसन गर्ने र जनताले अत्यधिक मतबाट जितेको व्यक्तिले शपथ पाउने कि नपाउने ? चुनाव लड्ने इजाजत दिएपछि जनताको अभिमतको कदर र सम्मान राज्यले गर्नुपर्छ । सरकारले उनको शपथ गरायो ।
तपाईंले भनेको बाटो अपनाएर सरकारले उनको मुद्दा टुंग्याएको भए पनि हुन्थ्यो । आन्दोलनकारीमाथि झुठा मुद्दा लगाइँदैन । यो देशमा कांग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन गरेको होइन ? माओवादी र एमालेले सशस्त्र आन्दोलन गरेका होइनन् ? माओवादीले १७ हजार मान्छे मार्‍यो । सबै आन्दोलनमा दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा सर्वसाधारण र प्रहरी दुवै मारिएका छन् । तर उहाँहरूमाथि मुद्दा त लागेन । आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि थरुहट आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिमाथि मुद्दा लगाइदिने? जनाताले निर्वाचित गरे पनि जेलमा कोचेर राखिदिने ? आजसम्म भएको आन्दोलनमा कसैलाई मुद्दा नलाग्ने, कोही अपराधी नहुने तर त्यो थारूको बच्चा अपराधी हुने ?
तपाईंहरूमाथि रेशम चौधरीलाई हैन, अपराध र अपराधीलाई शपथ खुवाएर राजनीतिमा अपराध संस्थागत गर्नुभयो भन्ने गम्भीर आरोप छ नि ?
यो मुलुकमा सुरक्षाकर्मी मार्नु अपराध हो भने त्यस्ता अपराधी प्रधानमन्त्री पनि भए त । यो कुरा कसले उठायो ? तपाईंको मिडियाले वा अरूले ? मैले पटकपटक भनिसकेको छु के थरूहट आन्दोलन पहिलो आन्दोलन हो ? मधेस आन्दोलन पहिलो हो ? चाहे कम्युनिस्ट चाहे कांग्रेस सबैले आन्दोलन गरेका होइनन् । सबैका आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी आन्दोलनकारी मारिँदा उहाँहरू क्रान्तिकारी हुने अनि थरूहट आन्दोलन गर्ने चौधरी अपराधी हुने ? यस्तो विभेद पनि हुन्छ । यस्ता दरिद्र मानसिकतका मानिसमाथि मलाई दया लाग्छ ।
यो मुलुकमा अपराधीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कोको हो ? आउनुपर्‍यो नि अगाडि । आन्दोलनमा मारिएका प्रति हामीलाई दुःख लागेको छ । टीकापुरमा सानो बालक मारिँदा हामीलाई दुःख लागेको छ । मधेस आन्दोलनमा चार वर्षीय बालक प्रहरीको गोलीबाट मारिए । आन्दोलनमा भएको क्षतिको दोष एक जनाको टाउकोमा हाल्न मिल्छ ? यो नश्लबादी चिन्तन हो । सबैलाई एक ढंगले व्यवहार गरौं अपराधी हो भने सबैलाई त्यही हिसाबले व्यवहार गरौं । नेपालमा मात्र हैन संसारमा आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी मारिएका छन् । त्यसलाई अपराधसँग जोड्नु गलत हो ।
हामीले मधेसका जनतासँग जुन बाचा गरेका थियौं, त्यसमा हामी अहिले पनि प्रतिबद्ध छौं । आन्दोलन गर्दा जनता र आन्दोलनकारीलाई नै सास्ती हुन्छ । त्यसैले आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्नेमा हामी सजग छौं ।
सरकारलाई दिएको समर्थन अब के हुन्छ ?
अब सरकार हाम्रा माग पूरा गर्न सक्रिय छ भन्ने आशा जगाएको छ । हाम्रा अन्य मागमा पनि सरकार जिम्मेवार र लचिलो हुने विश्वास छ । त्यसैले हामी सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिने पक्षमा छैनौं ।
अनि बेलाबेलामा किन समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिनुहुन्छ त ?
सरकारले हामीलाई जस्तो व्यवहार गर्छ हामी पनि त्यस्तै व्यवहार गर्छौं । सरकारले अहिले हामीमाथि राम्रो व्यवहार देखाएकाले तत्काल सरकारविरुद्ध जाने हाम्रो कुनै सोच बनेको छैन ।
त्यसो भए सरकारप्रति तपाईंहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
समग्रमा यो सरकारको काम गराइप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौं । जनता सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । जनाताको काम सकारात्मक रुपमा गएको छैन । केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा एक घन्टा भाषण गर्नुभयो । यो पनि गरें त्यो पनि गरें भनेर उहाँले मात्र भनेर त भएन नि । उहाँले गरेको काम त जनताले भन्नुपर्‍यो नि । जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै काम भएका छैनन् । सरकारका लागि यो ठूलो चुनौती हो ।
तपाईं पटकपटक सरकारमा बस्नु भएको छ । यो सरकारलाई कसैले काम गर्न नदिएको कि आफैं गर्न नसकेको हो ?
यो दुई तिहाइको सरकार हो । अल्पमतको वा मिलीजुली सरकार भएको भए पार्टनरले काम गर्न दिएन, यसो भयो उसो भयो भन्न मिल्थ्यो । हामीसँग बहुमत नै मिलेन, ताकतै पुगेन भन्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन । यस्तो सरकारले कसैले काम गर्न दिएन भन्न पाउँछ ?
आन्दोलन गर्नुपर्दा तपाईंहरू तराई जानुहुन्छ र आन्दोलन पनि गर्नुहुन्छ । कार्यकर्ता आन्दोलनमा घाइते हुन्छन्, मारिन्छन् र उनीहरूमाथि विभिन्न मुद्दा लाग्छन् तर तपाईहरू केन्द्रमा आएपछि त्यो बिर्सिनुहुन्छ । कारण के हो ?
मसहित राजपा अध्यक्ष मण्डल प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न बालुवाटर गएका थियौं । हामीले गम्भीरताका साथ संविधान संशोधनलगायत मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता लिन उहाँलाई ध्यानाकर्षण गर्‍यौं । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्याैं, हाम्रो धैर्यको बाँध टुट्न लाग्यौ । अब हाम्रो बाटो चेन्ज हुन्छ है भन्याैं । यो कुरा मैले संसद्बाट पनि उठाएँ । त्यसपछि सरकारले चौधरीको शपथ गरायो । हामीले मधेसका जनतासँग गरेको जुन बाचा गरेका थियौं, त्यसमा हामी अहिले पनि प्रतिबद्ध छौं । आन्दोलन गर्दा जनता र आन्दोलनकारीलाई नै सास्ती हुन्छ । त्यसैले आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्नेमा हामी सजग छौं ।